SFI - Söderhamns kommun
Bowlinghall & ungdomscafé
| Shaqada & Waxbarashada
| Waxbarasho dadka waaweyn
Waxbarashada iswiidhishka ee dadka waddanka u soo guurey (SFI) waxay ku siinayaan aqoon aasaasi ah oo luqada iswiidhishka ah. Waxaad baraneysaa af-iswiidhishka si aad af-isweydaarsato iyo qoraal ahaan nolol-maalmeedka, nolosha bulshada iyo nolosha shaqada. Kuwa aan wax ku baran karin ama qori karin afkooda hooyo waxaa la siiyaa fursad ay wax ku bartaan. SFI waxay u furan tahay da 'kasta illaa da'da 16 sano.
Halkan waxaad ku bilaabieysaa arday ahaan. Ardaydu waxay helayaan aqoonta SFI gaaban. Barida qiyaas aad u sareeya, labadaba kooxo iyo shakhsi ahaanba. Luqadda ayaa la duuduubay. Markii la sameeyo, waxaad taqaanaa heerka kugu habboon.
Sfi waxuu leeyahay saddax waddo.
Jidka waxbarasho ee 1 dadka aan waxba akhrin
karin waxbana qori karin ama heysta waxbarasho aad u gaaban, marka laga hadlo wadada waxbarasho ee 3 waa mid loogu tala galay dadka waxbarashada caadeystay.
Natiijada aad heleysid koorso kasta dhamaadkeeda waa A-F. A ayaa ugu sarreeyso F na waa marka lagu dhaco.
SFI waxaa lagu dari karaa, tusaale, shaqo, tababar shaqo ama waxbarasho kale ee waxbarashada dadka waaweyn ee degmada.
SFI wuxuu leeyahay iskaashi dhow la leh xafiiska shaqada iyo Redo (Resurcenterum). Xafiiska shaqada waa mas'uul ka ah aasaaska ardayga ee Sweden taas oo macnaheedu yahay magdhow ah in ardayda ka xafiiska shaqada helaan.
Xafiiska shaqada waxuu u ogolaanayaa ardayda SFI shaqo, baraktik, ama xirfat iyo shaqo raadin. Ardey kastana waxaa uu ku leeyahay xafiiska shaqada qof hanleegarah oo gaar u ah ee xafiiska shaqada. Hadafku wuxuu yahay in dad badan intii suurto gal ah si ay u gaaraan fasalka heerka Dga ah ka dibna inaad wax ka barato luqad labaad, SAS, ama shaqo ama tababar ee Swedish.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan SFI afkaaga halkan.
Sidee baan ugu shaqeyn karaa si dhakhso ah?
Ma haysataa shahaadada tacliinta?
Raadi shaqooyinka banaan
Waa maxay tababbarka aad u baahanahay?
Tani waa sida suuqa Iswidhishku u shaqeeyo
Ku saabsasan dugsiyada Isweden
Filimka: Ka raadso shaqada xafiiska shaqada
Iska rajistargaree Jobbskills
Dugsiyada xanaanada caruurta
Fasalada xanaanada caruurta
Dugsiga xili firaaqada